I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL ngekhe zikwazi ukufaka i-Android Q beta kude kube nguJuni | I-Androidsis
Ngomhla we-7 kaMeyi, abafana abavela kuGoogle bazisa ngokusesikweni isizukulwana esitsha sohlobo lwePixel, isizukulwana esitsha esabhaptizwa njenge IPixel 3a kunye ne3a XL kwaye ibonakaliswa ngokuba lukhetho lwezoqoqosho lwePixel 3 kunye ne3 XL, ngokusebenzayo iimpawu ezifanayo nabakhuluwa bakhe, ngaphandle kweprosesa.
Kwesi siganeko sinye, uGoogle ubhengeze ukumiliselwa kwe-beta yesithathu ye-Android Q, I-beta esele ikwazi ukufakwa kungekuphela kuyo yonke i-Pixel, i-Pixel 2 kunye ne-Pixel 3, kodwa nayo Ixhasa ukuya kuthi ga kwiimodeli ezingama-21 ze-smartphone, ngokonyusa ukungqinelana kwezixhobo zenkqubo kunye nePie yePie.
Nangona kunjalo, ngaphandle kokuveza iPixel 3a entsha kunye ne-3a XL, njengoko sinokufunda kwiwebhusayithi yenkxaso kaGoogle malunga ne-Android Q, ezi ndawo, nangona sele zithengisiwe, azifakwanga kwinkqubo, ke ngaphandle kokuba ziitheminali zikaGoogle ezine-Android emsulwa, akukho ndlela yakwenza ngokusemthethweni ngenkqubo ye-beta. Ewe, ukuba unolwazi oluyimfuneko, ungayifaka ngesandla nangona kunokwenzeka ukuba ayizukubonisa ukusebenza okulindelweyo.
Ngaba uya kuba ukusuka ngoJuni Xa ezi modeli ziya kuba yinxalenye yale nkqubo ngokusesikweni nangokuthe ngqo kwizixhobo kwaye ngaphandle kokubhenela kumaqhinga, siya kuba nakho ukufaka uhlobo olulandelayo lwe-Android Q, uguqulelo lwe-Android esingasalazi ukuba igama layo lokugqibela liza kuba yintoni kuba.
I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL terminals zikhona Kuthunyelwe ngohlaziyo lwamva lwePie ye-Android ngenyanga kaMatshi. I-Google Pixel 3a inexabiso le-399 euros ngelixa imodeli enobukhulu obukhulu bescreen, iPixel 3a XL ifikelela kuma-euro angama-479, amaxabiso ahlengahlengisiweyo kodwa olo uyilo lweminyaka emi-3 eyadlulayo alwenzi ukuba lulungele uluntu ngokubanzi, kuphela abo ufuna i-Android emsulwa ngaphandle kokuthathela ingqalelo ezinye izinto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL ngekhe zikwazi ukufaka i-Android Q beta kude kube nguJuni
I-Play Store iyasazisa ukuba khange sisebenzise izicelo ixesha elide kwaye iyasicebisa ukuba senze ntoni ngazo